Xilibaanada federaalka ee debeda jira oo lagu amray in ay dalka ku noqdaan 15 cisho gudohood ah – Radio Daljir
Oktoobar 6, 2013 2:47 b 0
Muqdisho, October 6, 2013 – Gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari, waxaa uu baaq u jeediyey xillibaanada Soomaaliya ee ku maqan dalka debediisa iyo weliba qaar ka mid ah gobollada oo ay u tageen fasaxyo iyo howlo shaqo.
Prof. Jawaari waxaa uu sheegay in loo qabtay xilibaanada maqan mudo 15 cisho ah in ay ku soo noqdaan fadhiyada Baarlamanka, waxaa uu si cad u sheegay in aan la fasixi doonin xilibaan wixii ka dambeeya 20 bishaan October ee aynu ku jirno.
? Sharci ayaa la marin doonaa cidii laga waayo fadhiyada baarlamanka wakhtiga loo qabtay wakhti aan ahayn.? Dhowr jeer ayaa kooramka baarlamanka is dhimay oo fadhiyo baaqdeen.? Ayuu yiri Prof. Jawaari
Docda kale waxaa uu sheegay in dhowaan fadhiyada dhacaya uu Baarlamanka hor imanayo Ra?isal wasaaraha dalka Soomaaliya Saacid Faarax Shirdoon, iyadoo xilibaanada baarlamanka Soomaaliya ay su?aalo la xiriira howlaha xukuumada weydiin doonaan.
Baarlamanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer u ka baaqday kooramkii fadhiyada xilibaanada laga rabay, waxaana arintaas sabab looga dhigay mudanayaasha ku maqan banaanka iyo weliba gobollada kale ee dalka.
Ciidamada Jubba oo baaritaan ka bilaabay Xaafada Faanoole ee Kismaayo oo maanta Qarax ka dhacay